Akụkọ nche maka mmelite Google Chrome ọhụrụ | Gam akporosis
Kedu ihe ọhụrụ na nchekwa maka Google Chrome
Nchebe Ntanetị na-echegbu ndị ọrụ ruo ọtụtụ afọ. Nnukwu ndị ọrụ ntanetị ha na-agbasi mbọ ike ịkọwa (ma mee ka anyị kwenye) na anyị nwere nchekwa n'ịntanetị. Ma oge na oge ọzọ o doro anya na, ọbụlagodi maka oge ahụ, nchebe na-ahapụ ọtụtụ ihe a chọrọ. Google Chrome na-arụ ọrụ ịgbanwe echiche a.
Si na ebe nrụọrụ weebụ a ma ama na nnukwu ụlọ ọrụ akaụntụ data ndị ọrụ gị nọ n'ihe ize ndụ, olee otú ndị ọzọ na-adịchaghị mkpa. Site na Google ha na-ekwu na ha ga-agbasi mbọ ike ịnye ndị ọrụ ha ahụmahụ nwere ọkwa dị elu.
1 Google Chrome ugbu a nwetụrụ nchebe
2 Njikwa okwuntughe ka mma
Google Chrome ugbu a nwetụrụ nchebe
La mbipute nọmba 83 nke ihe nchọgharị a, ebe ọ kwụsịrị nọmba ole na ole n'usoro, ọ na-enye anyị akụkọ dị mkpa na nchekwa. Mmelite nke ga - eme anyị igodo bụ odi mfe na karịa ihe niile, na anyị nwere obere mpụga iwe. Anyị nwere akpaka nchọpụta nke eche ọnweghị nchedo peeji nke site na igbochi ebe nrụọrụ weebụ phishing.
Google nwere a "ojii ndepụta" nke weebụsaịtị weere dị ize ndụ, nke mere na mgbe anyị banyere n'otu akụkụ ya, a ga-amara anyị ọkwa ozugbo. E wezụga nke ahụ, ugbu a ga-emelite ndepụta a kwa ụbọchị 30 iji chịkwaa mgbanwe mgbe niile nke ngalaba na aha webs ndị a kere naanị maka omume ọjọọ.
Onye ama ama na esemokwu "Ọnọdụ incognito", nke e gosipụtara n'ikpeazụ nke na-adịghị ma ọlị, ma ọ bụrụ na anyị ọ ga - efe ịhapụ kuki ahụ iru ala. Ihe anyị nwere ike ịgbalite ma gbanyụọ n'ụzọ dị mfe yana akara ngosi maka ya dị ka anya nke dị na ogwe adreesị.
Njikwa okwuntughe ka mma
Google Chrome na-enye anyị nwere paswọọdụ njikwa ijikwa nbanye na weebụsaịtị chọrọ njirimara. A) Eeh anyị ga-enyocha njirimara na-akpaghị aka na-enweghị ide aha njirimara na paswọọdụ oge ọ bụla anyị nwetara. Ihe ohuru bu na n'otu oge ahụ ọ na-eme ka ịnweta njikwa na-echebara kọmputa ndị ị na-enweta na ọ bụrụ na onye ọrụ ọzọ nwere ike iji okwuntughe anyị.
Anyị ga-enweta ịdọ aka ná ntị na-akpaghị aka ma ọ bụrụ na Google Chrome achọpụta na okwuntughe ọ bụla echekwara na ihe nchọgharị ahụ enwere ike iji ya n'ụzọ enweghị ikike.. Ihe ngosi a ga - egosi mgbanwe okwuntughe maka ihe di iche iche iji zere ohi njirimara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Kedu ihe ọhụrụ na nchekwa maka Google Chrome
Realme X50 Pro Player Edition ka ekpughere: ekwentị egwu 5G nwere ọnụ ala belatara
Etu ị ga-esi kpọghee nhazi nke Dolby Atmos na OnePlus 8, OnePlus 7T na OnePlus 7